Woraanni Agaazii Ayyaantuu Muhaammad irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Woraanni Agaazii Ayyaantuu Muhaammad irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwate
BY Haawii Abdusabur | Ajjeechaan Ayyaantuu Muhaammad irratti raawwatame shira yeroo Yeroo Mootummaa Cee'umsaa (1992) Woyyaaneen hojjatte nu yaadachiisuu qaba.
Agaaziin lubbuu Ayyaantuu Muhaammad Shaanqoo bifa suukkanneessaa ta’een galaafatte. Ayynaatuun kan ajjeefamte Harargee Bahaa, magaalaa Qobbootti. Ayyaantuun ulfa turte. Gochi suukkanneessaan Ayyaantuu irrratti rawwatame hedduu nama gaddisiisa, nama dallansiisa, mar’umaa namaa raasa.
Qabsoo hadhaayaa geggeessaa turreen Woyyaanee irratti injifannoo heddu galmeessinee jirra. Injifannoon keenna akkuma nu gammachiisu, Woyyaanee fi woraana isii, Agaazii, hedduun rifachiisuu fi xiiqqii keessa seeensisuun isaa ifa. Gama siyaasaatiin injifatamuun isaanii gara humnaatti isaan geessuu mala. Yoo ajjeechaan akkanaa irra deddeebi’e rifannootaan gara tooftaa fi tarsiimoo dogoggoratti nu geessu, injifannoo hanga ammaa arganne nu harkaa harcaasutti deemuu waan hin qabneef, rakkoon akkanaa irra deddeebi’aa nu mudatuu akka malu yaaddoo keessa galchuudhaan ammumaa tooftaa irra aannuun lafa kaayachuuu qabna. Siyaasni tooftaan malee aariif debii laatuudhaan hin hojjatamu. Aariin akka siyaasa nama harkaa balleessu waan beekuuf kan diinni aarii fi dallansuu keessaa akka nuti hin baaneef kan nurratti hojjatuuf. Aariidhaan dhiibamnee woshaadoo diinaatti dirgim jechuu hin qabnu.
Tooftaan Woyyaanee, ajjeechaan akkanaa, hamilee Oromoo cabsuu qofa osoo hin taane daandii injifannoo irraa nu baasuu, Dr Abiyyii fi Ob Lammaa irraa abdii akka kutannu nu taasisuudha. Ajjeechaa akkanaatiin rifannee, shira isaan xaxaniin abdii kutannee gonkumaa gara qorqalbii cabuu fi uflamaanii wolitti garagaluutti deebi’uu hin qabnu. Kana godhuun hawwii Woyyaanee dhugoomsuudha.
Bara 1992 ajjeechaa fi doorsisaan dhamaastee Woyyaneen ABO mootummaa cee’umsaa keessaa baaste. Afrikaa Kibbaa keessatti lubbuun nama hedduu kan galaafatame erga maandellaan mana hidhaatii bayee mootummaa worra adii woliin marii nagaa eegaleeti. Kana jechuun namoonni jijjiitrama hin barbaanne jijjiirama dhufuu malu gufachiisuudhaaf shirri hin xaxne, yakki hin hojjanne hin jiru jechuudha. Qormaanni wolfakkaataan yoo gara fundurattis nu mudate, hafa hin fakkaatu, nu raajuu hin qabu. Qabsoo irra waan jirruuf tooftaa fi bilchina siyaasaa rakkoo bifa kanaa irra aannuun lafaa qabaachuudha falli.
Ajjeechaa Woyyaaneen doorsisamnee, shira isiin qabamnee injifannoo galmeessisaa jirru harcaasuu hin qabnu.Kan ajjeechaan nutti hammatuuf waan biraatiif osoo hin taane akka moo’ataa jirru waan baraa dhufaniif. Woraanni Agaazii bifa ijaaramee fi hin ijaarmneen ajjeechaa nutti hammeesuu mala. Qormaata nu mudatuu malu hunda irraa toftaa fi bilchina siyaasaan irra aanne sirna kanatti xumura godhuu qabna.
Ayyaantuuf rabbiin haa araaramu. Maatii Ayyaantuu fi Oromoo guutuuf obsaa fi jajjabina haa laatu.
Previous articleMinisterri Muummee, Dr Abiyyi Ahmad, miilaan gadi dhaabachuu fi aangoo isaa cimsachuuf dursa laatuu qaba
Next articleHaasawa Dr Abiyyi Ahmad, muummichi ministera Itoophiyaa, magaalaa Ambootti godhan